Xinsammuuf inteerneeti yeroo keenya amma – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Xinsammuuf inteerneeti yeroo keenya amma
Maxxaansa keenya yeroo darbee kessatti akkuma yadatamuu waayee dhibbaa bilbila keenya gadi jedhaanii fayyadamuun fiduufi furmata isaa ilaallera! Kutaa har’aa kessattii ammaoo dhibbaa xinsammuu inteerneetiin garmalee yoo fayyadmnee nurraan gahuu ilaalla. Inteernetiin yeroo hanga yerootti kusaa oddeffaanoo dorgomsifamaa hin qabnee tahaa dhuufera. Kanan wal qabatees odeffannoon dhibbaa xinsammuu gurguddaa nama irraan gahan bayachaa dhufaniiruu. Isaan keessaa muraasi ” Fesibuuki “, ” Gamble – Qumaara ” ,” Pornografii ” dha.
Feesbuuk nuyis dabalatee hundi keenyayuu akka fayydamnuu beekamadha. Hatahuu malee Feesbuukin kan inni hundeffameef namootni akka salphati wal baraniif hiriyummaa gaariin gidduu isaaniti umaamuuf malee dhimma “maqa ballessii , wal arabsuuf , kan kana fakkataniif miti. Hatahuu malee biyyoota gudinnarra jiran kannnen akka Afrikaa kessumaa biyya keenya irratti dhibaa inni qaqabsisuu hamma kana jedhamuu miti, Namootnii baayyee feesbuukii akka hojii idilee isaanniti hojii dhiisuun yeroo isaanii irratti dabarsan akka jiran beekamaadhaa, Isinoo ? Kessuummaa biyya keenya kessatti haalli fayadama feesbukii keenyaa akkuma bu’a gagari xiqqoo tahan gama siyaasatiin fide, faallaa isa tahee immo akka ittin meeshaa walsodachisu,olola addaa ittin wal irratti banutillee gargaara jira.Kana malees namotni baayyeen gowwomsaa addaa addaattiif saaxilama jiru. Isin mudatee beekaa laata ?
Egaa namotni baayyeen kessan gama Feesbuuktin mudanoo baayyee akka isin qabdan ni hubana, rakkoo xinsammu Feesbuukiin gesisu dandahuu kessaa tokko namooti passwordi(lakkofsi darbii) isaani jalaa hatamee naasuuf dhipina guddaa keessa seenu innis odeffaannoo addaaa addaa isaan namoota wajjin wal jijiran salphati wan jala dubifamuuf maxxanfamuu dandahuufi.
Kanaafu hanga isini dandahametti turti feesbuuki irratti qabdan hirisuun beekuumsa ofii gudifachuu irratti dhamahuun bayeessa jenne amana.
Pornogiraafiin afaan oromootin hikkaan yeroodhaaf kan hin argamneef yoo tahele namoota jechi kuun isiniti haraheef hikkaan isaa ” filmi wal-qunamti saala agarsisu jechudha ” pornogiraafiin toora marsariti irratti erga gadi lakiffamuu jalqabee wagootti heedduun darbeera. Hatahuu malee kan baayyee nama aja’ibsisuu biyyi keenya Itopiyaan biyyoota afrikaa keessaa dawwatoota filmii kanaatin sadarkaa dursitoota kessa seenaa dhufuu isheeti. Pornoogiraafiin kun dhiras hatahuu dubara irra midhaa xinsammu gesisu ni dandaha . Dhibbaa gurguddaa inni xinsammuu keenyaa irratti qaqabsisuu ha ilaallu.
Vidiyoowwanifi filmii pornogiraafii nama wajjinin taahanii ilaalun waan nama qaanessuuf namoti ilaalu barbaadan qobaa taahu filatu. (Qoba galetti ykn qoba galessa tahuu)
Shaakala toora umamaa hin egganne kan birattillee ceesisun akka yaalan dirqamsisa isaan kessaa tokko afaan ingiliffaan masturbation kan jedhamee bekamu yommu tahuuu kana jechuuniis ofiin of gamachisuu kan jedhamu shaakalu jechudha kana jechuunis hormoniin dopamini qaama keenya kessa garmalee mancahuudhaan walqunamti saalaa isa umama taheef akka fedha hin qabanee gochaa deema. Namotnii shaakala hamaa kana kessa seenan ofitti amanamummaan isaanii gadi buhaa adeema, sodaataa ykn sodaattu tahuu.
Yeroo interneettii fayadamuuf jettaniti kan dursee sammu kessan kessa isiniti yaadatamuu pornogiraafi taha.
Akka mukubasati akka itti fayadamtan isin godha, suusi ykn amaleffanna waan isiniti tahuuf.
Furmaati isaa maaliree ?
Namooti amaleeffanna akasii kessa osoo hin beeekin seentan gorsi keenyaa isiniif kana fakkata. Kan isin hubachuu qabdan namnii kamiyuu dogogoraan kana kessa waan dandahuuf nahuun isinirraa hin eegamu.
Qobummaan gaafa isinitti dhagahamuu namoota wajjiin wal argaa mobayilii kessan laptopi kessan hin firomfatina. Hiriyoota kessan waliin wal arguun yeroo gaari dabarsuu shaakalaa.
Amantii kessannitti jabaachuudhaa kadhanaa godhachuun immoo furmata isa guddaadha jenne yaadna.
Softiweerota marsariti kana cufan fayyadamuun ofirrallee dhorkuu dandessu.
Kaneen armaan olirra kana darbuu yootahee ifa tahuun oggessa fayyaa sayikatiristii waliin mariyachuun furmaata itti barbadachuu dandessu.
Waliti qabaatii jara keenya namoti baayyen xinnaa guddaa osoo hin jeedhin amaleffannaa kana kessa seenani itti rakkacha jiru kan ammoo rakkoo walxaxa kessallee seenaa jiru. Egaa of-egaadhaa isinin jenna, irraa baradheera yoo jetani yaaddu tahee hiriyootaf firota kessaniin gaha!